လွတ်လပ်မှုနှင့် ငြိမ်းချမ်းတိုးတက်မှု အတွေးစ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » လွတ်လပ်မှုနှင့် ငြိမ်းချမ်းတိုးတက်မှု အတွေးစ
လွတ်လပ်မှုနှင့် ငြိမ်းချမ်းတိုးတက်မှု အတွေးစ
Posted by nyanakyaw on Nov 28, 2011 in Copy/Paste |5comments
လောကလူသားအားလုံး အမှန်တရားကို မနှစ်ကြိုက်သူမရှိ၊ သို့ပေမယ့် မှန်ကန်ရုံမျှဖြင့် လူသားငြိမ်းချမ်းတိုးတက်မှု လမ်းစဉ်မဟုတ်ပါ။
ယနေ့ကမ္ဘာ့လူသားအားလုံး လွတ်လပ်မှုနှင့်ငြိမ်းချမ်းတိုးတက်မှုကို အထူးလိုလား ကြပါသည်။ ဒါကိုပင် ဒီမိုကရေစီစနစ်ဟု ပြောဆိုကျင့်သုံးနေကြပါသည်။ လွတ်လပ်မှုဆိုသည်မှာ တစ်ဦးတစ်ယောက် ကောင်းစားလွတ်လပ်မှုမဟုတ်ပါ။ လူသားထု တစ်ရပ်လုံးအတွက်ဆိုတာ သိဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းရှိ အခြေခံလူတန်းလွှာထဲတွင် အများဆုံး ကြားသိနေရပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီတော့ မလိုချင်ပါဘူးကွာ။ မင်းမှာလဲ အမေတို့ အစ်မတို့ ရှိတာပဲ ငါ့မှာလဲ ရှိတာပဲဆိုပြီး ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ ဒီလိုလူတန်းလွှာတွေကို ဒီမိုကရေစီစနစ်၏ အနှစ်သာရ သဘောတရားတွေ နားလည်လာဖို့အတွက် အထူး လိုအပ် ပါတယ်။
လွတ်လပ်မှုနှင့်ငြိမ်းချမ်းတိုးတက်မှုဆိုတာ ခွဲခြားပြောဆိုလို့ မရပါဘူး။ လွတ်လပ်မှုကို တိုင်းတာရန်အတွက် ငြိမ်းချမ်းတိုးတက်မှုသည် စံဖြစ်ပါသည်။ ငြိမ်းချမ်းတိုးတက်မှုမရှိသော လွတ်လပ်မှုသည် အနစ်သာရမရှိသော လွတ်လပ်မှု၊ လွတ်လပ်မှုဟုနှုတ်မှပြောရုံမျှ လွတ်လပ်မှုပင် ဖြစ်ပါသည်။ လွတ်လပ်မှုကို ဘာနဲ့တိုင်းတာမလဲဆိုရင် လူသားအားလုံးငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့တိုင်းတာရမှာပါ။ လူသား ပတ်ဝန်းကျင်ကို မငြိမ်းချမ်းစေသော လွတ်လပ်မှုတွေကို ဖန်တီးသူတိုင်းဟာ လူသား လောကပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ မကိုက်ညီပါဘူး။ ဒါကိုပဲ ဥပဒေနှင့်အညီ လွတ်လပ်ရမယ်လို့ ပြောတာပါ။ ဥပဒေကိုစတင်ဖော်ဆောင်ရခြင်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကလဲ လူသားအားလုံး ငြိမ်းချမ်းတိုးတက်ေစေဘို့ပါ။ သို့ပေမယ့် အစစ်အမှန် ငြိမ်းချမ်းတိုးတက်မှုကို မပေးစွမ်းနိုင်တာ၏ သာဓက တစ်ခုကတော့ လူသားအချင်းချင်း ဖြစ်ပွားနေတဲ့ စစ်ပွဲများက သက်သေခံလျက် ရှိပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းတိုးတက်မှုကို မဖော်ဆောင်နိုင်သော လုပ်ရပ်နှင့်အတွေးအခေါ်မှန်သမျှ အားလုံးသည်လည်း လွတ်လပ်မှုရှိေသော လုပ်ရပ်မဟုတ်ပါ။
ဒီနေရာမှာ တစ်ခုဖြည့်စွက်ပြောဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ လွတ်လပ်မှုဆိုတာ ကတော့ လူသား အားလုံးမှာ ရှိတဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှစ်ရပ်စလုံး လွတ်လပ်ဖို့ လိုပါမယ်။ ရုပ်ပိုင်း ဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှု၊ မလွတ်လပ်မှုကတော့ ပေါ်လွင်ပေမယ့်၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လွတ်လပ်မှု ကတော့ မပေါ်လွင်သော ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လွတ်လပ်မှုထဲတွင် မိမိသိသော၊ ခံယူသော အတွေးအခေါ် သဘောတရားပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ ဒီအသိ အတွေးအခေါ်သဘောတရားတွေကလည်း အခြားသူများထံမှ လက်ဆင့်ကမ်း သယ်ဆောင်ရယူရတဲ့အတွက် အားလုံးသည် မှန်ကန်သောအသိ၊ လူသားငြိမ်းချမ်းတိုးတက်သော အသိ ဖြစ်ဖို့ ခဲယဉ်းလှပါတယ်။ လူသားအများစုသည် အခြားသူတို့ အများသိသလို လိုက်သိသောအတွက်ကြောင့် အများနှင့်ညီလို့ ငါ့အသိလည်း မှန်မယ်လို့ ယူဆမရပါဘူး။
ဒါကို ဥပမာတစ်ခုနှင့် ထုတ်ပြမယ်ဆိုရင် လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်ကာလတုန်းက လူသားတွေဟာ ကမ္ဘာကြီးကိုပြားတယ်လို့ လက္ခံပြီး သိနေကြတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ကမ္ဘာကြီးကို လုံးတယ်လို့ ပြောတဲ့ လူပုဂိ္ဂုလ်တစ်ဦးကို သူသိတဲ့ ကမ္ဘာကြီးလုံးတယ်လို့ သိတာကိုပြောတဲ့အတွက် သေဒဏ်ပေးပြီး သတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီအဖြစ်ဟာ ကမ္ဘာကြီးလုံးတယ်လို့ သိသူဟာ အများအသိနဲ့မညီသူဖြစ်လို့ ဒီသူရဲ့ အသိဟာ အမှားလို့ သတ်မှတ်ကြခြင်းရဲ့ မဟာအမှားတစ်ခုပါ။ ဒီလိုလုပ်ရပ်ဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လွတ်လပ်မှု မရှိခြင်းပါဘဲ။ ထိုသူသိသော အသိသည် အများလက္ခံယုံကြည်သော ကျမ်းဂန်စာပေနှင့်မညီလို့ ဆိုသော အချက်ဖြင့် သေဒဏ် စီရင်ခြင်းသည် အလွန်မသင့်မြတ်သော လုပ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့အချိန်မှာလည်း ထိုကဲ့သို့အကြောင်းအရာများ များစွာ ရှိနေဆဲပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် တွေ့ရှိနေရသော အကြောင်းတစ်ခုကတော့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည် လူသားတိုးတက်ဖို့၊ လူသားငြိမ်းချမ်းဖို့ လမ်းညွှန်ပြောကြားချက်များသည် အများလက္ခံ ယုံကြည်သော ရှေးရိုးစွဲယုံကြည်မှုများနှင့်မတူညီသည်ကို အကြောင်းပြု၍ ပြစ်ဒဏ်များပေးခြင်း၊ အင်အားကြီးမားမှုကို အားကိုပြီး နှိပ်ကွပ်ချိုးနှိမ် ရေးသားပြောဆိုခြင်းများ ပြုလုပ်နေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
ထို့ကြောင့် ဟိုယခင်အချိန်ကာလနှင့် ယခုတိုးတက်နေသော ကာလ လူသားတို့၏ အခြေအနေမှာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှု၊ လွတ်လပ်မှုများ ရှိသော်လည်း စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ (အသိပိုင်းဆိုင်ရာ) တိုးတက်မှုမှာ ဟိုယခင်အချိန်နှင့်မခြားလျက်ရှိသည်ကို လေ့လာ ဆန်းစစ်မိပါသည်။
နောက်ဆုံး နိယာမသဘောအရ လွတ်လပ်မှုအစစ်ရရှိရန်အတွက်ဆိုရင် လူသား အားလုံး တိုးတက်ငြိမ်းချမ်းစေမှုကို ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်သော အသိသဘောတရား ရရှိကြမှသာ လူသားလွတ်လပ်မှု အစစ်အမှန်ကို ခံစားနိုင်မှာပါ။ လွတ်လပ်မှုအစစ်အမှန် ရရှိသွားလျှင်လည်း လူသားလောက တိုးတက်ငြိမ်းချမ်းမှုကို တည်ဆောက်သွားကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လွတ်လပ်မှုနှင့်အတူ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ(အသိသဘောတရား)ဆိုင်ရာ နှစ်ရပ်စလုံး လွတ်လပ်ပြီး လူသားတိုးတက်ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဖော်ဆောင်နိုင်ကြစေရန် ရည်သန်လျက် ရေးသားအပ်ပါသည်။
အကြံပေး၊ ဝေဖန်ချက်များကို မျှော်လင့်လျက်
View all posts by nyanakyaw →
အကြံတော့ ပေးမသွားနိုင်တာ ခွင့်လွှတ်ပါဗျို့၊
“ံအခြေခံလူတန်းစားတွေက ဒီမိုကစီဆိုတာတော့မလိုချင်ပါဘူးကွာ၊မင်းမှာလည်း အမေတို့အမတို့ရှိတာပဲ ငါ့မှာလည်းရှိတာပဲ”ထိုသု့ိသောလူတန်းစားများကို အသိပညာများတိုးပွါးလာအောင်ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။လွတ်လပ်မူဆိုတာလည်းမှန်ကန်သောလွတ်လပ်မူဖြစ်ရပါမည်။ငါအသက် ၁၈နှစ်ပြည့်ပြီ ဘာမှလာမပြောနဲ့ ဆိုတာမျိုးလည်းမဖြစ်သင့်ဘူး၊မှန်မှန်ကန်ကန် တွေးခေါ်နိုင်ဖို့ အသိပညာများလိုအပ်ပါတယ်၊အဲဒီအသိပညာတွေတိုးပွါးစေဖို့လက်လှမ်းမှီသလောက်ဆောင်ရွက်ကြပါစို့။
အယူအဆ အတွေးအခေါ် မတူကြတဲ့ သူတွေ စုပေါင်းပြီး တိုင်ပင်ကြ ငြင်းခုံးကြ လုပ်တာတွေဟာ
ဒီမိုကရေစီရဲ့ အနှစ်သာရ လို့ထင်ပါတယ်။
ကမ္ဘာကနေကို ပတ်နေတယ်ပြောလို့.. Galileo က..တသက်တာ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်နဲ့နေသွားရတယ်..။
Giordano ကတော့ ..မီးရှို့သတ်ခံလိုက်ရတယ်..။ လွန်ခဲ့တဲ့.. အနှစ် ၄၀ဝ ကျော်( သက္ကရာဇ် ၁၆၀၀) လေးကပေါ့…။
Giordano Bruno (1548 – February 17, 1600), born Filippo Bruno, was an Italian Dominican friar, philosopher, mathematician and astronomer. His cosmological theories went beyond the Copernican model in proposing that the Sun was essentiallyastar, and moreover, that the universe contained an infinite number of inhabited worlds populated by other intelligent beings. He was burned at the stake by civil authorities in 1600 after the Roman Inquisition found him guilty of heresy for his pantheism and turned him over to the state, which at that time considered heresy illegal. After his death he gained considerable fame, particularly among 19th and early 20th century commentators who, focusing on his astronomical beliefs, regarded him asamartyr for free thought and modern scientific ideas.
“”မြန်မာနိုင်ငံတွင်းရှိ အခြေခံလူတန်းလွှာထဲတွင် အများဆုံး ကြားသိနေရပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီတော့ မလိုချင်ပါဘူးကွာ။ မင်းမှာလဲ အမေတို့ အစ်မတို့ ရှိတာပဲ ငါ့မှာလဲ ရှိတာပဲဆိုပြီး ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ ဒီလိုလူတန်းလွှာတွေကို ဒီမိုကရေစီစနစ်၏ အနှစ်သာရ သဘောတရားတွေ နားလည်လာဖို့အတွက် အထူး လိုအပ် ပါတယ်။””
ဟုတ်တယ်ကိုညာန ရေ ကျနော်တို့က အခြေခံလူတန်းစားတွေထဲမှာလုံးထွေးနေရတော့ သူတို့ ရဲ့ ဒီမိုကရေစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အသိ၊ခံယူချက်တွေကို သိနေတယ်၊ ဒီကိစ္စ ကျနော်ရေးဖူးပါတယ်။ သူတို့တွေ သိလာဖို့တော်တော်လုပ်ယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲဒီလူတန်းစားတွေက တတိုင်းပြည်လုံးရဲ့ ၈၀% လောက်ရှိမယ်ထင်တယ်။